ကိုရွှေလိပ်: ရေသောက်ခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူး
" သင် မသိဘဲ ... သင့်မှာ ရှိနေနိုင်သော .... ရောဂါမဟုတ်သော ရောဂါ "
ဘဝသစ် ဆီသို့ ...
မင်္ဂလာပါခင်ဗျား..။ ဒီနေရာဟာ လိပ်ခေါင်းရောဂါ အကြောင်း ဗဟုသုတ မျှဝေရာ ဘလော့လေးပါ။ မိမိတို့အတွေ့အကြုံကို လာရောက်လည်ပတ်သူတွေ ဗဟုသုတရစေဖို့ မျှဝေချင်တယ်ဆိုရင် ..... ( koshweleik@gmail.com ) သို့ စာရေးသားပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.။
သင်ဟာ .. အထိုင်များတဲ့သူ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ထက် အသားငါးကို အစားများတဲ့သူ၊ အစာကြမ်းထက် အစာနုကို အစားများတဲ့သူ၊ ဝမ်းချုပ်တတ်သူ၊ အိမ်သာတက်လျှင် အချိန်ကြာတတ်သူ၊ ကိုယ်လက်လှူပ်ရှားမှူ အားကစားနည်းသူ ဆိုရင်တော့ ...
မိတ်ဆွေမှာ လိပ်ခေါင်းရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေ ရာနှူန်းပြည့်ရှိနေပါပြီ။
မိတ်ဆွေရဲ့ ဘဝ နေထိုင်စားသောက်မှူပုံစံကို မပြောင်းဘူးဆိုရင်တော့ ...
မကြာခင် လိပ်ခေါင်းရောဂါ ဖြစ်ပါတော့မယ်...
မိတ်ဆွေ ဒါတွေကို သင်သိပါရဲ့လား ...
သင် တစ်ရက်ကို ရေ ဘယ်လောက်သောက်လဲ စဉ်းစားကြည့်ပါဦး။ ဥပမာ၊ တစ်ရက်ကို ပျမ်းမျှ ရေ ၆ပုလင်းခန့် သောက်တယ်ပဲ ထားပါတော့။ တစ်ရက်ကို ၁ဂါလန်။ တစ်လကို ရေ ဂါလန် ၃၀၊ တစ်နှစ်ဆိုရင် ၃၆၅ဂါလန်၊ စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ခန္ဓာကိုယ်ကို ပေးလိုက်တဲ့ ရေပမာဏ အလွန်များပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့် အဲဒီလောက် သောက်နေရတာလဲလို့ မေးလို့ ရေဆာလို့ သောက်နေရတာဆိုရင်တော့ မိတ်ဆွေရဲ့ ကျန်းမာရေးဗဟုသုတ အတော်နဲရာ ရောက်နေပြီ။
လူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ ရေရဲ့ လုပ်ဆောင်ပုံတွေကတော့ အံမခန်းပါပဲ။ လူ့ခန္ဓာကိုယ်က ရေကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန် အသုံးချဖို့ လူတစ်ယောက်က တစ်ရက်ကို ရေပမာဏ ဘယ်လောက် သောက်ရမလဲဆိုတာကိုတော့ အငြင်းပွားဆဲပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အဖြေက ရှင်းရှင်းလေးပါပဲ။ ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်အကြောင်း ကိုယ် အသိဆုံးပါပဲ။ အဓိကအားဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ရေလိုအပ်ချက်က အောက်ပါ အချက်တွေ အပေါ်မှာ မူတည်နေပါတယ်။
၁။ ခန္ဓာကိုယ် လှူပ်ရှားမှူ
၃။ ကျန်းမာရေး အခြေအနေ
ကိုယ်လက်လှူပ်ရှားမှူများတဲ့အခါ၊ ကာယလေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ထားတဲ့ အခါတွေမှာ ရေများများလိုပါတယ်။ ပူပြင်းတဲ့ အရပ်ဒေသတွေမှာ ရေများများ သောက်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါတွေကို အားလုံးသိကြပြီးသားပါ။ နောက်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ရေပမာဏ လိုအပ်ချက်က မိမိရဲ့ ကျန်းမာရေး အခြေအနေနဲ့လည်း ဆက်စပ်မှူ ရှိနေပါသေးတယ်။
သောက်သုံးလိုက်တဲ့ ရေက ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဘာအလုပ်တွေ လုပ်တာလဲ ...
ဒါကိုတော့ လူတိုင်း သတိထားမိကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ လူတစ်ယောက်ဟာ အစာမစားဘဲ တစ်လလောက် နေနိုင်ပေမယ့်၊ ရေမသောက်ဘဲနဲ့တော့ ၃ရက်ထက်ပိုပြီး အသက်မရှင်နိုင်ပါဘူး။
ရေရဲ့ အဓိက လုပ်ဆောင်ချက်တွေကတော့ ...
၁။ ဝမ်းမချုပ်အောင် ကာကွယ်ပေးတယ်၊
၂။ အညစ်အကြေးတွေကို ပျော်ဝင်စေပြီး ဆီးမှ တစ်ဆင့် စွန့်ထုတ်ပေးတယ်၊
၃။ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ရှိတဲ့ အရိုးအဆက်တွေမှာ ချောဆီအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပေးတယ်၊
၄။ ခန္ဓာကိုယ် အပူချိန်ကို မျှတစေတယ်၊
၅။ တစ်သျှူးနဲ့ ဆဲလ်တွေကို စိုစွတ်ပြီး ရှင်သန်နေစေတယ်၊
၆။ အာဟာရနဲ့ အောက်ဆီဂျင်ကို တစ်သျှူးနဲ့ ဆဲလ်တွေဆီကို ပို့ပေးတယ်၊
ရ။ မျက်ကြည်လွှာ၊ အာခံတွင်း၊ နှခေါင်း စသည်တို့ကို စိုစွတ်နေစေတယ်။
မိမိသောက်လိုက်တဲ့ ရေက ဒါတွေကို လုပ်ဆောင်နေနိုင်ရပါမယ်။ ဒါ့ကြောင့် မိမိသောက်သုံးလိုက်တဲ့ရေက သန့်ရှင်းဖို့ အထူးလိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ အားလုံးသိကြမှာပါ။ ကြားဖူးတဲ့ စကားလေးတစ်ခွန်း ရှိပါတယ်။ ရေဆာတယ်လို့ မိမိကိုယ်မိမိ ခံစားမိတဲ့ အချိန်မှာ အဲဒါ ခန္ဓာကိုယ်ကို ရေပေးဖို့ရာ နောက်ကျနေပါပြီတဲ့။ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရေဆာပြီလို့ ခံစားမိတဲ့ အချိန်မှာ အာခေါင်တွေခြောက်နေပြီ၊ မောပန်းနွမ်းလျနေပြီ။ မိမိသောက်လိုက်တဲ့ ရေက ခန္ဓာကိုယ် တစ်ခုလုံးကိုရောက်ဖို့၊ ပြန်လည်း ဖြန့်ဝေဖို့ အချိန်ယူရဦးမှာမို့ ဆာလို့ သောက်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ နောက်ကျနေပြီလို့ ဆိုတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဘယ်လိုကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် ခန္ဓာကိုယ်ကရေဓာတ်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အတွက် ထပ်မံဖြည့်ဆည်းပေးရပါမယ်။ လူအများစုက ရေဆာရင် ကော်ဖီ၊ လဖက်ရည်၊ကိုကာကိုလာ၊ ဘီယာ စသည်တို့နဲ့ အစားထိုးတတ်ပါတယ်။ ဒီအရည်တွေက ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ရေလိုအပ်ချက်ကို ပိုမိုစေတယ်ဆိုတာကိုတော့ မသိကြပါဘူး။ အထူးသဖြင့် ချွေးထွက်များတဲ့ လေ့ကာယ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပြီးချိန်၊ ဖျားနေချိန်၊ အထက်လန်အအောက်လျှော (ဝမ်းသွားခြင်း၊အော့အန်ခြင်း)ဖြစ်နေချိန်တွင် ခန္ဓာကိုယ်မှ ရေဓာတ်များစွာ လိုအပ်သည်။
ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အဓိက လိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့ "လေ"ပြီးရင်၊ "ရေ"ဟာ ဒုတိယ အရေးအကြီးဆုံးပါ၊ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ လူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ ရေ ၆၆% ပါဝင်ပါတယ်။ ကြွက်သားတွေမှာ ရေ ၇၅%ပါဝင်တယ်။ လူ့ဦးနှောက်ရဲ့ ၇၈% ကလည်း ရေတွေပါပဲ။ နောက်ဆုံးတော့ ကျွနိုပ်တို့ ခန္ဓာကိုယ်ဟာ ရေမြှုပ် တစ်ခုလိုပါပဲ။ အားလုံး ရေတွေချည်းပါပဲ။
ဒါကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ရေလိုအပ်ချက်ကို စနစ်တကျ ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းဖြင့် ရနိုင်တဲ့ ရေရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကို ဖေါ်ပြရမယ်ဆိုရင်တော့ အောက်ပါ အတိုင်းပါပဲ။
၁။ ကိုယ်အလေးချိန်ကို လျှော့ကျစေတယ်၊
၂။ အဆီကို လောင်ကြွမ်းစေပြီး ကြွက်သားတွေကိုဖြစ်စေတယ်၊
၃။ အရေပြားကို နုပျိုလန်ဆန်းစေတယ်၊
၄။ အရိုးအဆစ်နဲ့ ကြွက်သားတွေ နာကျင်မှူကို သက်သာစေတယ်၊
၅။ ခန္ဓာကိုယ်က မလိုအပ်တဲ့ အဆိပ်တောက်တွေကို ဖယ်ရှားပေးတယ်၊
၆။ လူကို တက်ကြွလန်းဆန်း နေစေတယ်၊
၇။ နှလုံးရောဂါဖြစ်ပွားနှန်းကို လျော့ကျစေတယ်၊
၈။ အစာခြေစနစ်ကိုထောက်ပံ့ပြီး ဝမ်းသွားရ လွယ်ကူစေတယ်၊
၉။ ခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့် မူးဝေခြင်းကို သက်သာစေတယ်၊
၁၀။ ရောဂါကူးစက်ခြင်းနှင့် ဖြစ်ပွားနှုန်းကို လျော့ကျစေတယ်။
အဓိက ကတော့ ရေသောက်မနည်းဖို့နဲ့ ရေသောက် နောက်မကျဖို့ပါပဲ။ ဒါဆိုရင် အခုဖေါ်ပြတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေအားလုံး ရပါပြီ။
ရေးသားတင်ပြသူ - ကိုရွှေလိပ် ၊ အချိန် 5:09 pm
Labels: အရည်တွေ အကြောင်း
ko moe March 09, 2017 1:53 pm
ရေအများကြီးသောက်နေရပါတယ် ညဆိုရင်လဲ ရေသောက်လိုက် ဆီးသွားလိုက်နဲ့၁နာရီတစ်ခါလောက်ထပြီးသောက်နေရပါတယ်ခင်ဗျာ ရေမသောက်ရင်လဲ အာခေါင်တွေခြောက်လာပါတယ် ကူညီပေးကြပါ့ဦးဆရာလို့
တစ်နေ့ကို ဟင်းသီးဟင်းရွက် ၅မျိုး အနည်းဆုံးစားပါ။ ....
တစ်နေ့ကို ဖိုင်ဘာ ၃၅ ဂရမ်စားမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားပါ။ ....
ပန်းသီးတစ်လုံးမှာ ဖိုင်ဘာ ၅ ဂရမ် ပါတယ်။ ....
ပန်းသီးစားရင် အခွံပါစားရမယ်။ ....
ပြောချင်တာရှိရင် ပြောခဲ့ဗျာ ..
ကိုရွှေလိပ် .. ဆိုတာ ဘယ်သူလဲ ....
ကိုရွှေလိပ်ဆိုတာ လိပ်ကလေး ပါ။
တင်ပြီးသမျှ တွေ .. Blog Archive
ဖိုင်ဘာ (ချည်မျှင် ဓာတ်)
မင်္ဂလာသတင်းစဉ် မှ ကျန်းမာရေး ဆောင်းပါးလေးတွေ ...
လိပ်ခေါင်းအကြောင်း ဆရာဝန် တင့်ဆွေနဲ့ အမေးအဖြေ
လူငယ်တို့တွင် ဖြစ်လာသည့် သွေးချို-ဆီးချို
အသက်တရာ ကျန်းမာစွာ နေနိုင်ရန်
သင်္ဘောအရွက် နဲ့ ကင်ဆာ
နုပျိုချင်ရင် ဒါတွေစား အပိုင်း(၁)
မောင်မောင်လှိုင်(အပ်စိုက်ကု)၏ ကျန်းကျန်းမာမာ အသက်(၁၀၀) စာအုပ်မှ ကောက်နှူတ်ချက်များ ...
၁။ အစိမ်းရောင် လဖက်ရည်ကြမ်း
၂။ အနီရောင် စပျစ်ဝိုင်
ရေနွေးကြမ်းသောက်လို့ အိပ်မပျော်ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲတဲ့။
"သောက်သင့်တဲ့ အရည်တွေထဲမှာ ဒုတိယက ဝိုင်အနီ ပါပဲ။
အနီရောင် စပျစ်သီးနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ ဝိုင်အနီဟာ
ရုပ်တရက် နှစ်လုံးခုန်ရပ်ခြင်းမှ ကာကွယ်တယ်။
နောက်ပြီး ဝိုင်အနီက သွေးတိုးနှူန်းကိုကျစေတယ်၊
ဒါ့အပြင် သောက်ရမယ့် ပမာဏကိုပါ သတ်မှတ်ထားတယ်။
အရက်ဆိုရင် နေ့စဉ် ၅ မှ ၁၀စီစီ၊
ဝိုင်အနီဆိုရင် နေ့စဉ် ၅၀ မှ ၁၀၀စီစီ၊
ဘီယာဆိုရင် နေ့စဉ် ၃၀၀စီစီထက် မပိုစေနဲ့တဲ့။
ဝိုင်မသောက်နိုင်ဘူးလား..လွယ်ပါတယ်. စပျစ်သီးအနီကို ဝယ်စားပေါ့၊
ပြီးရင် အခွံပါစား၊ အခွံမှာ ပါတဲ့ OPC ဓာတ်ကလူကို အကျိုးပြုတာ။
အသက်ကြီးလာရင် မိနစ်ဝက် (၃)မျိုးဆိုတာကို အမြဲဂရုစိုက်ရမယ်။
ပထမ မိနစ်ဝက်ဆိုတာက .. အိပ်ယာက နိုးနိုးချင်း ချက်ချင်းမထပါနဲ့၊
မိနစ်ဝက် ခဏငြိမ်နေပါ။ မိနစ်ဝက်ပြည့်မှ ထိုင်ပါ။
ဒုတိယ မိနစ်ဝက် ထိုင်ပြီးရင် ချက်ချင်း လမ်းမလျှောက်ပါနဲ့။
ဟာ .. ညနေက အကောင်းကြီး၊ ညကြတော့ ဆုံးပြီးတဲ့။
ညဉ့်နက်နက်မှာ အိမ်သာသွားဖို့ ထလိုက်တာ ရုတ်တရက်
ဦးနှောက်ထဲ သွေးဝင်နဲပြီး မူးလဲသွားတယ်၊ ရုတ်တရက်
နှလုံးခုန်ရပ်သွားမယ်။ လေဖြတ်သွားမယ်၊ အသက်သေဆုံးသွားမယ်၊
မိနစ်ဝက်ဆိုတာကို သတ်မှတ်ချင်ရင်တော့ လွယ်လွယ်လေးပါ။
၁ ကနေ ၃၀ အထိ ရေလိုက်၊ အဲဒါ မိနစ်ဝက်ပဲ။
asfhasfbhasdfg. Watermark theme. Powered by Blogger.